ဒီတစ်ခေါက်တော့......ရန်ကုန်မြို့တော်ကြီးနဲ့....ပါတ်သက်ပြီး......တာဝန်ရှိသူတွေ ရဲ့လုပ်ပေါက်တွေ ကပြည် သူတွေ အားမရ.....ပြည်သူတွေလိုအပ်ချက်တွေနဲ့လွဲနေတာတွေကို.....PAW PAW တို့အဖွဲ့ လ္ဘက် ရည်သောက် အီးပေါက်ကြဖြစ်တာပေါ့.....သတင်းစာတွေကို မွှေနှောက်နေတဲ့ ဘော်ဒါကြီး ကတော့ ....ပြီး ခဲ့တဲ့လက ကြေးမုံ သတင်းစာ စောင်းပါးတစ်ပုဒ် ဖတ်ဖြစ်တယ်...... ရန်ကုန်မြို့ကြီးမိုးတွင်း ကာလေ၇ကြီး ကြီးနေတာကို.....မရှိတော့တဲ့ ရေ၀ပ် ဧရိယာကိုပြန်ဖော်ဆောင်မလို့.... လုပ်နေကြ တယ်ဆိုပဲ .......မြေဈေး ကြီးလို့.....၀ိုက်လို့ပဲကုန်သလောက်ရှိနေပြီ.....ဘယ်နေရာဖော်မလဲ စောင့်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုပဲ.....တကယ်ဆို၇န် ကုန်မြို့ကြီး၇ဲ့ရေ၀ပ် ဧရိယာ အကြီးဆုံး ကန်ကြီး နှစ်ကန်ကိုပဲ......အလုပ်ဖြစ်အောင် မစဉ်းစားတတ် တာ ခက်တယ်ဆိုပဲ.......ဘယ်လို...ဘယ်လို ....မေးမိတော့......ကန်တော်ကြီး၊အင်လျား ကန်ကြီး နှစ်ကန်က ရေတွေကို.....နွေရာသီမှာစုပ်ထုတ်(သက်ြန်အချိန်ရေပေးပက်လိုက်တစ်ချက်ခုတ် နှစ်ချက်ပြတ်.......ရွှီးဖြိုး နဲ့တော့ညှိပေါ့) မိုးတွင်းကာလ ဆို.....တစ်ပါတ် တစ်ခေါက်လောက် မော်တာအား ကောင်းကောင်း နဲ့ စုပ်ထုတ်ပေး ရင်......ကန်တော်ကြီးအနီးတ၀ိုက်နဲ့....အင်ယ…
ခုခေတ်စားနေတဲ့ ကားတင်သွင်းမူဝါဒနဲ့ ပါတ်သက်ပြီး......ကားသွင်းကြသူတွေ ကြား...... ပွက်လော ရိုက်နေကြတာ နဲ့ ပါတ်သက်ပြီး .......PAW PAW တို့လည်းပွားကြတာပေါ့...... ကားလောကအကြောင်း လေ့လာခဲ့တဲ့ ဘော်ဒါတစ်ယောက်ကတော့.....ကားတင်သွင်းကြတဲ့....လုပ်းငန်း.....ဟိုးအရင် ၁၉၈၀ ကျော် မ ဆ လ ခေတ်ကုန်ခါနီး အချိန် က စပြီး လုပ်လာကြတယ်.....အဲဒီခေတ်ကကားသွင်းဖို့ဆိုတာ ဂျပန်ကို ရောက်နေကြတဲ့ .... .မြန်မာ နိုင်ငံသားတွေက တဆင့် ......တင်သွင်းကြရတာပေါ့ ......မလွယ်ကူခဲ့ပါဘူး ....... earning ဆိုတဲ့ အခွန်ဆောင် ထားတဲ့ငွေ......(သဘောင်္သား၊ ပညာတော်သင်၊ အလုပ်ကိစ္စနဲ့ သွားကြသူတွေ တနှစ်စာ သံရုံး မှာ အခွန်ဆောင်ရင် ရလာတဲ့ စာရွက်ကလေး )နဲ့ ပါ မစ်လျှောက် ပြီးသွင်းကြရတာပါ...... ၈၈ နောက်ပိုင်း COMPANY တွေ ခေတ် (ထွန်းကြည်ခေတ်)ေ၇ာက်လာတော့ ......COMPANY က လူတွေက လုပ်ပိုင်ခွင့် ရှိသူတွေနဲ့ ပေါင်းပြီး earning စံနစ်ကြီးကို ဖျက်ပြီး..... လုပ်စား ၊ပေါင်စားကြတော့တာပါပဲ......ဒါကို သတင်းရတဲ့ အတွင်းလူတွေက earning ပါမစ်တွေ လိုက်စုပြီး ဈေးတက်မှ ပြန်ရောင်းစားကြပြီး..... ခေတ်သစ် သူဌေး ဖြစ်သွား ကြပါလေရော......ပြော ချင်တာက ဒီချိန်ထိ တစ်…
(၅၉).....ဖြစ်ချင်တာ......ဖြစ်နေတာ......ရူးသွားရင်ကောင်းမယ်
လူ့လောက ကြီးမှာ.......ဖြစ်ပျက်နေကြတာ......အန်တွေ လွဲနေကြတာ နဲ့ပါတ်သက်ပြီး.....ဒီတစ်ခေါက် PAW PAW တို့ပွားကြတာပေါ့....................ကားမောင်းတဲ့ ဘော်ဒါကြီးကတော့...... အ၇င်မီးပွိုင့်ဟောင်း နဲ့ ရန်ကုန် မီးပွိုင့်တွေကို.....ခလုတ်လေးတွေ နှိပ်ပြီး.....မီးဝါဖြတ်တယ် ဘာညာနဲ့...... တာဝန်၇ှိတဲ့ ၊ ထောင် ခြောက်ဆင် ဖမ်းတတ်တဲ့ သူတွေနဲ့ စကားအခြေ အတင် ပြောမိတော့....ဘော်ဒါက စိတ်ပေါက်ပေါက် နဲ့နောက်ဆုံး .....တာဝန်ကြ၇ဲကို မင်းကားမောင်းတတ်လို့လားေ၇ာ့ ... ကားသော့ တက်မောင်း ဆိုတော့......ကားက MANUAL.....ဖြစ်နေတော့......တုတ်တုတ်မှ မလှုပ်......ကြည့်ရတာ ကားမမောင်း တတ်ပဲ..... ယာဉ်ထိမ်းတွေ၊ပွိုင့်တွေ လိုက်တပ်ဆင် သူတွေ....လုပ်နေတယ် ထင်ပါ့ဆိုပဲ...... .................................................................................................................................. နယ်မှာပရဟိတ သွေးဖောင်ဒေးရှင်း ......လုပ်နေတဲ့ဘော်ဒါတစ်ယောက် တွေ့လို့ .......... စကားစပ် မိတာကြရင်း သူရင်ဖွင့်ပြတာနားထောင်ခဲ့ရတာကဂလို... ...သွေးလိုအပ်ချက်အင်မတန်များပြီး. ..... လူနာရှင်တွေ အင်မတန်ဒုက္ခေ၇ာက်ရကြောင်း နဲ့......ထူးစမ်းတာ…
အနန္တော ၊ အနန္တ ငါးပါး ကို ဦးထိပ်ထားပြီး.......လူတွေ ထိုင်ကန်တော့ ကြပေမယ့်.....သင်ဟာ ထိုင်ကန်တော့ ထိုက်ခံ၇မယ်သူဆိုပြီး....ကိုယ့်ကိုကိုယ်ရော.......စိတ်ကောသန့်ကြ၇ဲ့လား......လိပ်ပြာကော လုံကြ ရဲ့လား .......ဆိုတာနဲ့ပါတ်သက်ပြီး ဒီတစ်ခေါက် ...... PAW PAW တို့ပွားကြတာပေါ့......ဘုရား ၊ တရား ၊ သံဃာ ၊ မိဘ ၊ ဆရာ......ကျေးဇူး၇ှင်တွေ ကို......လက်အုပ်ချီ ကန်တော့ ကြတာ တွေမှာ......ဟိုအရင် နိုင်ငံတော် ၀န်ကြီးချုပ် ဦးနု အာဏာရတဲ့ အ ချိန်အခါက......၀န်ကြီးချုပ် ခရီးစဉ်တွေမှာ ကိုယ့်ထက် အသက် အရွယ် ကြီးရင့်သူတွေက ......အဲဒီ ၀န်ကြီးချုပ်ကို......ဆံပင်တွေ ပေးနင်းကြပြီး......ပြားပြားဝပ် ထိုင်ကန်တော့ ကြတာ တွေ. ..... ဓါတ်ပုံ မှတ်တမ်းတွေ အရ တွေ့ရတော့ .....အံသြယူရပြီး......အော် သက်ကြီး ရွယ်အိုတွေ က ထိုင် ကန်တော့တာ.. သာယာမိ ခဲ့လို့.....ကံကြီး ထိုက်လေသလားဆိုပြီး....အတွေးပေါက်မိလေ၇ဲ့ ...... .ဥနေ၀င်း လက်ထက်မှာလည်း..... ထိုနည်းပါပဲ......အာဏာရှင် ဆိုတော့ သာယာနေခဲ့ တာပါပဲ......ဟို T V မင်းသားကြီးက ပိုတောင် သာယာနေခဲ့သေးတာပေါ့.......နိုင်ငံခြား ခရီးစဉ်တွေဆို......သံရုံးတွေ သွားပြီး ကန်တော့ ခံလေ၇ဲ့.....ကိုယ့်ထက် အသက်အရ…
နည်းပညာတွေက အဆင့် အရမ်း မြင့်လာတော့........တိုးတက်လာတဲ့ နည်းပညာတွေကို ခေတ်နဲ့ အမှီ လိုက်ပြီး အသုံးပြု တတ်မှ......ခေတ်.နောက်ကျကျန်မနေနိုင်တာနဲ့ ပါတ်သက်ပြီး......PAW PAW တို့ ပွားကြ ပြန်တာပေါ့......စင်ကာပူက ပြန်လာတဲ့ ဆင်ပျံ ကြီးက .......ဒို့မြန်မာနိုင်ငံက တကယ်တော့ ခုန်ပျံ ကျော်လွား နိုင်ငံပဲကွ ဆိုပဲ......ဘာဖြစ်လို့လဲ မေးမိတော့ T Vကိုပဲကြည့်တဲ့ ....သူများနိုင်ငံတွေမှာ အဖြူ ၊အမဲ T V က စကြပေမယ့်ဒို့နိုင်ငံက အဖြူ၊အမဲ T V ကို..... နောင်လာနောက်သား ကလေးတွေ ကို ပြောပြရင်......... ပုံပြင်လို့ထင်ကြမှာ အသေ အချာ ပဲတဲ့.......အဖြူ ၊ အမဲ T V ကို ဆယ်စုနှစ် တစ်ခု ချီ ပြီး မသုံး ခဲ့ ၇ဘူးဆိုပဲ........ဒီလိုပဲ hand phone တွေ မပေါ်ခင် ...တခြားတိုင်းပြည်တွေမှာ pager...... (ဂျပန်မှာတော့.... pocket bell) ဆိုပြီး ခါးမှာ ချိတ်တဲ့ စက်လေးကိုအရင်သုံးကြရတယ်တဲ့ .......အဲဒီ စက် ကလေးက နံပါတ်ကို .....လှမ်း ဆက်လိုက်ရင် ဆက်တဲ့ သူရဲ့ဖုန်းနံပါတ်က...... စက် မှာ လာပေါ် တာပေါ့ .....ဒီတော့မှ နီးစပ်ရာ (public phone )တွေကနေ ........စက်ကလူက ပြန်ခေါ်ရတဲ့ စံနစ်တွေ သုံး ကြရပြီး ......hand phoneပေါ်လာ ၊ သုံးလာကြရတယ်တ့…
(၅၅).....စီးပွားရှာတာရှာ.....တခြားသူကိုတော့ စိတ်အနှောင့် အယှက်မပေးသင့်
ရန်ကုန်မြို့တော်ကြီးမှာ .....နေထိုင် စီးပွား၇ှာနေကြတဲ့ သူတွေ များသောအားဖြင့် ....ကိုယ့်အတွက်ပဲ ကိုယ် ကြည့်ကြပြီး ....ဘယ်နေရာမဆို ဘရမ်းပတာ၊စည်းမရှိ၊ကမ်းမရှိ ဖြစ်ပျက်နေကြတာ
၊ ဗိုလ်ချုပ် ပြောခဲ့ သလို လမ်းပေါ်တက် ဆေးရိုးလှမ်းတာထက် ဆိုးနေကြတာ နဲ့ပါတ်သက်ပြီး ဒီ တခေါက် PAW PAW တို့ လ္ဘက်ရည်ဝိုင်း ထိုင် ......လေကန်ကြတာပေါ့......down town မှာ လှည့်ပါတ် သွားလာ နေတဲ့ ဘော်ဒါ ကြီးကတော့ ......မြို့ထဲနေသူတွေ များသောအားဖြင့် CAR PARKING အတွက် နေရာဦးကြတာလား ၊ ကိုယ်နေတဲ့ အခန်းရှေ့ ၊ ဆိုင်ရှေ့တွေ အမြင်ကွယ်မှာ စိုးလို့လား မသိပါဘူးကွာ နေရာတွေ ဦးထားကြတာ အမြဲ ပါပဲ.......ဒီတော့ ကိစ္စ ရှိလို့ မြို့ထဲ သွားရင် ကားရပ်ဖို့ နေရာကမရှိ ...... ဖြစ်ချင်သလို ဖြစ်နေကြတာ ဥပဒေတွေ စာအုပ်ထဲ မှာပဲ အိပ်နေလို့လား.....တာဝန်ရှိသူတွေပဲ အာဏာ သက်ရောက်မှု မရှိတာလား၊မလုပ်၊မရှုပ်၊မပြုတ်တွေကြောင့်လား မသိပါဘူးကွာတွေ့နေ ၊မြင်နေရ တာတွေက ဘာမှ မပြောင်းလဲတော့ စိတ်တိုင်းကို မကြ ပါဘူးကွာဆိုပဲ. .......................... ......... ..... ...........................................................................................…